Abanye Factory, abahlinzeki - China Abanye Abakhiqizi
Incazelo Yomkhiqizo: Kubasebenzisi abancane abasebenzisa imishini yeqhwa namakhasimende angasebenzisa iqhwa kumvamisa ojwayelekile emini, abadingi ukuletha uhlelo lwefriji lwendawo yabo yokugcina iqhwa. Ekamelweni elikhulu lokugcina iqhwa, amayunithi esiqandisini ayadingeka ukuze kuhlale kushisa ngaphakathi ukuze iqhwa ligcinwe ngaphakathi ngaphandle kokuncibilika isikhathi eside. Amakamelo e-Ice asetshenziselwa ukulondolozwa kweqhwa le-flake, ukuvimba iqhwa, amashubhu e-ice esikhwameni nokunye Izici: 1. Cold isitoreji ibhodi ukwahlukanisa ukushuba ...
Incazelo Yomkhiqizo: Umshini wokupakisha weqhwa le-Herbin uqukethe izingxenye ezintathu: ukuphakela, ukukala, ukupakisha. Amandla we-dynamo awodwa wokuhambisa, isikulufa esihambisa iqhwa. Sizinikele ekuhlinzekeni ngomshini olula, onokwethenjelwa, okonga imali weqhwa. Izici: Isakhiwo esilula, isisindo esincane, ezokuthutha ezilula. Yonke i-interface imbozwe ngensimbi engagqwali 304, ehambisana ngokuphelele nezinga lenhlanzeko yokudla. Ukucushwa kwesistimu konke kusebenzisa izinhlobo ezaziwayo.
Incazelo yomkhiqizo: I-Herbin inikeza imishini yokuchoboza iqhwa yokuchoboza ama-ice block, amashubhu e-ice, njalonjalo. Iqhwa lingachotshozwa libe yizicucu ezincane noma i-powder. Iqhwa elichoboziwe lingahlangabezana nezinga lenhlanzeko yokudla uma ikhasimende lidinga kanjalo. Izici: Igobolondo lenziwe ngensimbi yensimbi nensimbi engagqwali, ukuze kuqinisekiswe ukubukeka okuhle nokuhle. Umklamo we-Modular wenza kube lula futhi kuphephe ukusebenza. Ukusebenza kahle okuphezulu nempilo ende. Kwenziwe ngensimbi engagqwali 304. Inqubo ye-ice-crushi ...
Izinto zezikhwama zeqhwa zihlangana nezinga lokudla sanitary, eliqinisekisa iqhwa lokudla. Izikhwama ze-Ice ezinobukhulu obungafani ziyatholakala, ezingenziwa ngezifiso ngokwesampula yekhasimende. Imininingwane yezentengiso enamalogo ahlukene ingaphrintwa ezikhwameni. Izikhwama ezibonakalayo ngaphandle kokuphrinta zishibhile.